မြင့်မားသောတိကျသော Planetary Reducer Factory - တရုတ်မြင့်မားသောတိကျသော Planetary Reducer ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်အမှာစာ HA-060 ထုတ်ယူခြင်းစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်သည်ဟုတ်ကဲ့နံပါတ် MWA-HA-060 အမျိုးအစား Planetary reducer Gear type Gear reducer ပုံစံတပ်ဆင်ခြင်းပုံစံခုံသမာဓိလမ်းညွှန် Layout ပုံစံများပုံစံသုံးမျိုးသုံးစက်ကိရိယာ Gearhardness ခိုင်မာသွားမျက်နှာပြင်လျှောက်လွှာလျှော့ချအမှတ်တံဆိပ် MWA အမျိုးအစား MWA-HA-060 ထည့်သွင်းမှုနှုန်း 5000 （ rpm） ဝိသေသလက္ခဏာများ ၁။ Ha စီးရီးဂြိုဟ်လျှော့ချစက်သည်မြင့်မားသောတိကျမှု၊ မာကျောမှုနှင့်ကြီးမားသော bearing capacity ၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိသော cross roller bearing ကိုအသုံးပြုသည်။ ခံနိုင်ရည်ယခုအချိန်တွင် ...
ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်အမှာစာ HA-090 ထုတ်ယူခြင်းစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်းဟုတ်ကဲ့နံပါတ် MWA-HA-090 အမျိုးအစားဂြိုဟ်တုလျှော့ချခြင်း Gear type ဂီယာလျှော့ချစက်ပုံစံတပ်ဆင်ခြင်းပုံစံခုံသမာဓိလမ်းညွှန်အပြင်အဆင်ပုံစံများပုံစံသုံးမျိုးသုံးဂီယာခိုင်မာသောမာမာသွားသွားမျက်နှာပြင်လျှောက်လွှာလျှော့ချခြင်းအမှတ်တံဆိပ် MWA အမျိုးအစား MWA-HA-090 ထည့်သွင်းမှုနှုန်း 4000 （rpm） ဝိသေသလက္ခဏာများ 1. Ha စီးရီးဂြိုဟ်လျှော့ချစက်သည်မြင့်မားသောတိကျမှု၊ မာကျောမှုနှင့်ကြီးမားသော bearing capacity ၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည့် Cross roller bearing ။ ခံနိုင်ရည်ယခုအချိန်တွင်တည်ရှိသည် ...
ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်အမှာစာ HA-115 စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်မှုအပိုဆောင်းနံပါတ် MWA-HA-115 အမျိုးအစား Planetary reducer Gear type Gear reducer ပုံစံတပ်ဆင်ခြင်းပုံစံခုံသမာဓိလမ်းညွှန် Layout ပုံစံများသုံးဘီးဆိုင်ကယ်ဂီယာခိုင်မာသောမာသွားသွားမျက်နှာပြင်လျှောက်လွှာလျှော့ချရေးအမှတ်တံဆိပ် MWA အမျိုးအစား MWA-HA-115 ထည့်သွင်းမှုမြန်နှုန်း 4000 （rpm） ဝိသေသလက္ခဏာများ 1. Ha စီးရီးဂြိုဟ်လျှော့ချစက်သည်မြင့်မားသောတိကျမှု၊ မာကျောမှုနှင့်ကြီးမားသော bearing capacity ၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည့် Cross roller bearing ။ ခံနိုင်ရည်ယခုအချိန်တွင်တည်ရှိသည် ...